Ny naposaky ny Pandora Papers manerana ny firenena miteny paortiogey · Global Voices teny Malagasy
Manambara andiana tambajotra ara-bola manjavozavo ny gazety
Voadika ny 28 Oktobra 2021 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, Ελληνικά, Português
Pandora Papers — pikantsary avy amin'ny fantsona Youtuben'ny ICIJ, 15 Oktobra 2021
Tamin'ny voalohandohan'ny volana oktobra 2021, nampiharihary fandosirana hetra iraisampirenena goavana indrindra fantatra hatramin'izao ny tetikasa iarahan'ny tambajotran'ireo mpanao gazety iraisampirenena .
Fantatra amin'ny anarana hoe Pandora Papers ny tatitra, ahitana antontan-taratasy manodidina ny 12 tapitrisa ary mamoaka ho tazamaso ireo fifampiraharahana ara-bola manjavozavo ataon'ireo olo-malaza ambony isan-karazany, anisan'izany ireo mpanao politika any amin'ny firenena miteny paortiogey toa an'i Mozambika, Angola, Portiogaly ary Brezila.
Vokatry ny fanadihadiana niarahana tamin'ny Fikambanamben'Orinasa Iraisampirenen'ireo Mpanao gazety Mpanao fanadihadiana (ICIJ amin'ny teny Anglisy) ny tatitra, izay nanambara fa mpanao politika, olo-malaza ara-pivavahana, olona fanta-bahoaka ary mpanjaka — anisan'izany ireo mpiasam-panjakana 300, filoham-panjakana 35, ary miliaridera 130 — no nanangana kaonty any amin'ny banky any amin'ny firenena paradisan'ny hetra mba hanafenana ny harenan'izy ireo sy ny fanaon'izy ireo ara-bola.
Ahitana vaovao farany momba ireo fanadihadiana teo aloha ireo tatitra ireo, anisan'izany ny Panama Papers sy ny Paradise Papers tamin'ny taona 2016 sy 2017.
Ny voalohany dia miresaka momba ny fivoahan'ny antontan-taratasy tsiambaratelo maherin'ny 11 tapitrisa avy amin'ny orinasa mpanao lalàna Panameana Mossack Fonseca, izay mitantara amin'ny antsipiriany momba ireo orinasa offshore maherin'ny 214.000 sy ny anaran'ireo tompon'andraikitra ao aminy. Ny faharoa kosa ahitana antontan-taratasy maherin'ny 13 tapitrisa mitovy lohahevitra (amin'ny teo aloha).
Angola, Mozambika ary Paortiogaly
Mpanao politika maro no voarohirohy tany Angola, Mozambika ary Paortiogaly. Talohan'izay, tsy niraikitra tamin'ny tantara manafintohin'ny offshore ny anaran'izy ireo. Nanambara tambajotra ara-bola maizina mampifandray an'i Paortiogaly sy Mozambika ihany koa ny tatitra:
Tratra tao amin'ny Pandora Papers i Nuno Morais Sarmento, filoha lefitry ny @RuiRioPSD (ilay lehilahy tonga nanadio ny etika teo amin'ny politika Paortiogey). Nampiasa orinasa offshore ao amin'ny Nosy Virijiny Britanika ny minisitry ny Fitsarana PSD teo aloha mba hanaovana fandraharahana any Mozambika.
Araka ny antontan-taratasy, voalaza fa nampiasa vola offshore (ivelan-tsisitany) i Nuno Morais Sarmento hividianana sekoly fitsorahana anaty dobo filomanisana sy hotely iray any Mozambika tamin'ny taona 2006. Nanatanteraka izany ireo orinasa offshore mba hiala amin'ny fameperana manodidina ireo vahiny manana orinasa na fananana ao Mozambika. Na izany aza, nolavin’ity mpanao politika ity izay mety ho fanao tsy mety amin’ity raharaha ity. Ankoatra an'i Nuno Morais, voarohirohy ihany koa ireo mpanao politika Vitalino Canas sy Manuel Pinho.
Tsara marihina anefa fa tsy voararan’ny lalàna ny fandosirana hetra sy ny orinasa any ivelany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mba hoheverina ho ara-dalàna, dia tsy maintsy manambara ny fidiram-bolany any amin'ny firenena nisoratana anarana ny orinasa izy ireo. Manomboka eo dia afaka miditra amin'ny fandraharahana iraisampirenena izy ireo.
Nitatitra ny gazety iray ao an-toerana any Mozambika fa tafiditra tamin'ny angon-drakitra Pandora Papers maherin'ny 11 tapitrisa ny praiminisitra teo aloha, Aires Ali :
Tafiditra tamin'ny #PandoraLeaks i Aires Ali: manana harena miafina voasoratra ao Seychelles izy ary misy ny rohy mankany #Portugal:
“Tamin'ny taona 2013, nanome alalana ny orinasa hanokatra kaonty banky any amin'ny orinasa iray mitantana harena any Lisbonne izy sy ny zanany vavy.”
Efa ela nihetezana teo amin'ny politika Mozambikana i Aires Ali. Praiminisitra nandritra ny roa taona izy, 2010–2012, mandra-pandroahana azy tamin'ny fanovana kabinetra. Izy no minisitry ny Fanabeazam-pirenena ny taona 2005–2010 ary indroa no governoran'ny faritany. Efa masoivoho tany Shina tamin'ny taona 2016-2017 ihany koa izy. Hatreto dia tsy mbola naneho hevitra ampahibemaso momba ny fiampangana izy.
Mandritra izany, tsy mbola nisy anarana manokana nambara tany Angola, saingy milaza ny vaovao misy fa farafaharatsiny mpanao politika Angoley sivy no voarohirohy tamin'ny Pandora Papers. Marihina fa mikasika ny kolikoly niainga tany Luanda (Angola) tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 ny fanadihadiana farany nataon'ny ICIJ ary lasa fantatra amin'ny anarana hoe Luanda Leaks. Miampanga an'i Isabel dos Santos, zanakavavin'ny filoham-pirenena Angoley teo aloha José Eduardo dos Santos ho nanodinkodina vola tamin'ny alalan'ny raharaham-panjakana isan-karazany ny Luanda Leaks.
Tratran'ny tantara ratsy ny governemantan'i Bolsonaro any Brezila
Nahita ireo mpitati-baovao Breziliana tafiditra tamin'ny fanadihadian'ny ICIJ fa Breziliana teo amin'ny 2000 teo ho eo nisoratra anarana tamin'ny paradisan'ny hetra. Tsy ara-dalàna any Brezila ny fananana orinasa any ivelany, raha tsy hoe nambara tamin'ny sampan-draharaham-bola federaly izy ireo ary rehefa mihoatra ny 1 tapitrisa dolara ny fananany, dia ambara any amin'ny Banky Foibe.
Anisan'ireo anarana ireo ny olona roa manan-danja indrindra amin'ny politika ara-toekarena ao Brezila, ny minisitry ny Vola Paulo Guedes sy ny filohan'ny Banky Foibe Roberto Campos Neto. Voatanisa ihany koa ireo olona mpandraharaha malaza maro manohana ny governemantan'i Bolsonaro, anisan'izany i Luciano Hang sy Otávio Fakhoury.
Samy eo ambany fanadihadiana ataon'ny Vaomieran'ny Fanadihadiana Parlemantera momba ny fitantanan'ny governemanta ny valan'aretina COVID-19 sy ny Fitsarana Tampony tamin'ny famatsiam-bola ireo mpanentana vaovao faikany na i Hang na i Fakhoury. Nampanantsoina i Guedes sy Campos Neto mba hanome fanazavana any amin'ny Vaomieran'ny Raharaha Ara-toekarena (CAE) an'ny Antenimieran-doholona. Hatreto dia mbola nolavin'izy ireo ny fisian'ny tsy ara-dalàna rehetra.
Na izany aza, mandràra ireo manampahefana ambony tsy hanana tombontsoa ara-bola any Brezila na any ivelany izay mety hisy fiantraikany amin'ny politikan'ny governemanta ny Andininy faha-5 amin'ny Fehezan-dalàna fitondran-tenan'ny hisahana Fitantanana Federaly ambony. Hatramin'ny nidirany tao amin'ny governemantan'i Bolsonaro tamin'ny taona 2019, nampitombo ny fananany any ivelany hatramin'ny 14 tapitrisa real Breziliana (2,55 tapitrisa dolara amerikana) i Guedes.
Miovaova arakaraka ny firenena ny fanehoan-kevitry ny vahoaka manoloana ny tatitra, miankina betsaka amin'ny vaovao nambara sy ny fomba nitateran'ny haino aman-jery izany. Tany Mozambika, nahita ny mpisera aterineto iray fa saika tsy voamarika ilay raharaha, ohatra iray amin'ny fanjakazan'ireo mpanao politika ny haino aman-jery ao amin'ny firenena:
Noho izany, mbola fitaovana politika ampiasain’ny mpanao politika ny asa fanaovan-gazety izay “tian’ny haino aman-jery”.
Mahavariana fa tsy nisy gazety Mozambikana nitatitra ny raharaha Aires Ali niseho tao amin'ny Pandora Papers
Tsy azo lazaina ho toy izany koa ny any Paortiogaly, izay niadian-kevitra be ny raharaha.
Mpanao politika Portiogey telo no tratra tamin'ny fanadihadiana tsara nataon'ny mpanao gazety iraisam-pirenena 🗞🔎
João Paulo Batalha, mpikatroka miady amin'ny kolikoly, nilaza fa nanantena izy fa tafiditra tamin'ny Pandora Papers ny anaran'i Manuel Pinho, saingy niaiky izy fa gaga tamin'ny anaran'i Nuno Morais Sarmento sy Vitalino Canas.
Afrika Mainty2 andro izay
Afrika Mainty5 andro izay
Afrika Mainty1 herinandro izay
Nisintaka ireo Senegaly, Ivoariàna, Maoritaniàna mba hanomezana tombon-dahiny an'i M. Motsepe sy hahazoana toerana ao amin'ny CAF